Sida loo Ma Harlem Rux Dance
Sida loo Ma Harlem Rux
Eegmo Harlem waa qoob ka ah in ay ku lug leedahay dhaqaaqo qaybo ka mid ah jirkaaga hab isku xig xiga ka dib markii qaab gaar ah, arrimuhu of music ama garaaca. Waa xiiso leh iyo qoob ka mid xiiso leh in qaadataa wax ka yar 30 ilbiriqsi iyadoo aan lahayn xeerarka in cayaar; waxaa kaliya oo ruxaya socda duurjoogta tagayaan jirkaaga. The qoob ka Harlem Rux asalkiisu ka soo jeedo ee 1981, iyadoo nin magaciisa lagu tagaa "Al B," sida laga soo xigtay Uproxx. Odayga Harlem Rux lug pivoting mid garabka iyadoo isla dhisayaa baxay kale ah. Eegmo Harlem ku lug leedahay isticmaalka dharka ay ahaydba ah.
Qeybta 1: History of Harlem Rux
Qeybta 2: Facts More saabsan Harlem Rux
Qeybta 3: Sida loo sameeyo Harlem Rux
Qeybta 4: Top 10 Harlem Rux YouTube videos
Al B, wuxuu ahaa ninkii loo isticmaalo in aad la dheesho biririf ee Entertainer ee Basketball Classic ee Rucker Park ee Harlem tan iyo 1981, sida uu ku koray badan oo credit Internet-ka ee Been asalka Harlem Rux, qoob ka ciyaarka ah u ciyaarin sidii gundhin duurjoogta ah hubka iyo qayb sare ee jirka. Al B ayaa sheegay in cayaarta asalkiisu ka soo jeedo oo la mumiyayaasha ee Masar wakhtigii Fircoon, mumiyayaasha kuwan markay qayb ka mid sare ee jirkooda, maxaa yeelay, iyagu ma ay haysan xoriyad ay u isticmaalaan addimada iyo ay si dhab ah uma yaabaa inay u dhaqaaqdo. Dhammaan waayeen waxay ku sameeyaan ahaa ruxaya. Waxaa sidoo kale loo gudbiyaa sida qoob ka Waalan, eegmo khamriga, laakiin waxa ay aheyd fantastic, qof walba waxa uu jecel yahay oo qof walba waxaa ka maqsuuday.
Aragtiyo kale ayaa sidoo kale muujinaya in eegmo Harlem ahaa asal ahaan loo yaqaan "dhillo gilgil" ah. Waxaa intuu wadhfiyey ayuu isticmaalaan rag ganacsato lahaa safar, iyo soo qaado Hooker ah, laakiin mararka qaar wax u tegi lahaa qalad iyo Hooker ayaa qarxaya lahaa qalal. Later, waxaa helay taageero markii dadka isticmaali lahayd a daroogada kufsi taariikhda iyo dumarka fudud, laakiin isku mid ah daroogada la aalkoladu waxay keeni lahaa qalal dulmiga badan. Inta lagu guda jiro wajiga daroogada daanyeer ay cunayeen, magaca Maarraynta waxa loo yaqaan "Harlem gilgil" oo markaas ayay dib u noqdeen sida video cajiib ah YouTube ah oo kasoo muuqday cayaar caadiga ah ilaa iyo isbedelada music taas oo cayaartii noqon ogaaaday ka mid ah dadka wax loo qabto cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, dhawaan eegmo Harlem yeesheen isbedel cusub oo muusiko ah sida hip hop iyo raad music.
Harlem gariirin doonaa in uu la yaab leh la dhacsan yihiin Internet-ka ee sano ee ugu danbeeyay ayaa la filayaa inuu 30 seconds hore ee Bauuer ee "Harlem Rux", taas oo ahayd track qalabka Bass culus ah uploaded in YouTube on August 23, 2012 video wuxuu ku bilaabmaa hal qof oo kaliya , kaasoo sida caadiga ah xiran maaskaro, cayaaray in "Harlem Rux", halka dadka kale ay weli sameynayaan ay ganacsi sidii inaysan waxba dhaceynin. Ujeedadu waxay ka leexdo iyo tan waa 15 ilbiriqsi markii isbedel music ah, markaas waa pandemonium la cayaar qof walba ee dharka arin argagax iyo waji. Qaar ka mid ah wax tuur hawada, halka qaar kalena ay u qabtaan Bernie ah; twerk ah, ama xataa version asalka ah ee Harlem rux. Runtii Ma jiraan sharciyo set sida waxa guuro aad qalbigaaga ka soo dheesho.
Harlem Rux sidoo kale waxa uu helay in ka badan hal milyan oo views on YouTube; videos qaar ka mid ah Harlem Rux tago viral ee YouTube sabab u dhaqaaqdo ay xiiso leh iyo fantastic. Inkasta oo dadka kale waxya xad-dhaaf ah kala duwanaanta iyo parodies kasta ka militariga Norway, si ay burcad Lawska ah, in aan wax yar ka hadlaan, Friendship waa Magic, iyo xataa damiyeen gudaha baabuur ay.
Marka hore, ka heli Camera video ah ama telefoon ah oo wanaagsan. Baad tegaysaa si ay u qoraan laba qaybood oo kala duwan oo video; qaybta hore waa in aad salaantid hore ee dadka weli ku jira. Qaybta labaad waa dhan oo idinka mid ah dadka u ruxaya.
Gariiri Harlem waa 30 seconds qaataan si ay u noqon kartaa mid xiiso iyo fantastic. Sidaas daraadeed waxaad u leedahay in la sameeyo oo dhan ka qaadista iyo 30 ilbiriqsi gudahood oo ku lug aad ahaydba la shaqayn jiray ama saaxiibadood. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa music asalka ah ama habayn goofy ee asalka ah; waxa kale oo aad u baahan doontaa dharka u saaxiibadaa sida waji.
In 10 seconds hore u dhaqmaan caadi ah. Markaasay isla markiiba bilaabi nacas naftaada samaynta si buuxda oo ay bilaabaan in aad gacmaha ugu horeysay ee hal dhinac, kaddibna pivoting aad ka mid ah garabka socota sida aad twerk iyo baadari garabka kale ee aan anigu dibadda ah isku mar.
Iyadoo samayn ha habayn ah music generic ama goofy buuxin hawada gudahood qolkaaga iyo ay bilaabaan in aad ka qayb sare ee jirkaaga iyo jirkaaga gilgil. Markaas waa inaad qaylisaan "Do Harlem Rux", in looga digo saaxiibo aad oo ku guuleysatay waji in ay ku boodaan off kuraasta ay si aad ku biiri samaynta dhaqaaqdo la mid ah jirka ama gilgil sida waalan.
In 10 ilbiriqsi ee la soo dhaafay, qaylin oo dhan wax waalan hore ee camera ama dhagaystayaasha sameeyo sida aad usoo tuuro miskaha iyo khamri aad ku xidhnaa.
Qeybta 4: Top 10 Videos Harlem Rux YouTube
1. eegmo ciidamada Norway (Original Army Edition)
Tani waa asalka eegmo ciidamada Norwegian
Taariikhda Uploaded: February 10, 2013
Number of Views: 101.963.177
2. Fox- Harlem Rux
Subtitles Talyaani iyo Vietnamese
Taariikhda Uploaded: September 3, 2013
Number of Views: 420.588.632
3. Ha Harlem gariirin
Dadka ayaa u nooca buuxda weydiinaya si halkan waa. Plus, u qalmaa ay video gaar ah
Taariikhda Uploaded: February 2, 2013
Number of Views: 51.690.726
4. Harlem oo eegmo Homer shake-
Idinku waad aragteen inteeda kale, hadda daawan ugu fiican. Waa Simpson ayaa Harlem eegmo
Taariikhda Uploaded: March 1, 2013
Number of Views: 31.470.022
5. Harlem Rux (version JCSP)
Thanks YouTube u aqoonsaday TSCS ee meme oo ka mid ah laad Harlem Rux bilaabay internet ah
Number of Views: 26.586.881
6. Harlem Rux (edition World)
Daanyeer ruxruxaa by SINOKLY ah
Taariikhda Uploaded: March 6, 2013
Number of Views: 11.743.948
7. UGA Ragga Dabaal & quusin Harlem Rux
Dabaasha iyo quusin UGA ragga (video xilli ciyaareedkan)
Taariikhda Uploaded: February 11, 2013
Number of Views: 37.691.467
8. Harlem iyo V4 eegmo (version-demiye)
The Harlem oo eegmo (Iyada oo Aad u leedahay dhabta damiyaal)
Taariikhda Uploaded: February 7, 2013
Number of Views: 7.794.258
9. Best Wedding Entrance - Harlem Rux
Aroos galo Ron iyo Lisa horeysay ee
Taariikhda Uploaded: March 24, 2013
Number of Views: 3.236.398
10. Harlem Rux (Lawska Edition)
Rux Harlem waxaa xitaa cudurka sawir!
Number of Views: 1.766.741
Sida loo rogo ama YouTube in Quicktime MOV (Yosemite ka mid ah)
> Resource > YouTube > Sida loo Ma Harlem Rux